Mpanamboatra valizy Ceramic tsara indrindra | SICER
1. Sicer dia manana rafi-materialy seramika manankarena, ary afaka manome akora vita amin'ny seramika isan-karazany sy akora manosotra tena;
2. Eo ambanin'ireo fepetra miasa ireo ihany, ny androm-piainan'ny valizy seramika dia mihoatra ny 5-10 heny noho ny valizy vy tsotra;
3. Fampiasana ny teknolojia miatrika tsy manam-paharoa ny valizy amin'ny seramika mba hahatonga ny tombo-kase vita amin'ny seramika azo antoka sy marin-toerana;
4. Ny traikefa manan-karena amin'ny fisafidianana fitaovana vita amin'ny seramika dia mety mifanaraka amin'ny tetika faran'izay tsara arakaraka ny toe-javatra iasana (tsindry, matetika, salantsalany, sns.);
5. Fanaraha-maso onjam-pahefana elektrika / pneumatika / lavitra, famolavolana drafitra optimum ary famokarana mba hisorohana ny fahatapahana tampoka ary hiantohana ny fisokafan'ny valizy sy ny fanidiana azy malalaka ary ny fahamarinan-toeran'ny tora-pasika;
6. Sicer dia namolavola andiam-pamokarana valizy seramika vaovao, toy ny valizy ceramic C, valizy miendrika seramika ary valva zoro seramika, ary nampiroborobo azy ireo tamin'ny tsena;
7. Ampiasaina betsaka amin'ny tsiranoka asidra sy alkaly isan-karazany, etona avo lenta, fotaka, fitaterana solika ary rafitra fitehirizana. Izy io dia soloina tsara an'ny valizy vy titanium sy valva Monel ao anatin'ny toe-piainana mafy. Valve seramika an'arivony maro karazana no napetraka.
8. Serivisy fakan-kevitra momba ny teknika mitohy alohan'ny sy aorian'ny fivarotana.
Tetikasa lehibe indrindra misy solika-to-solika eto amin'izao tontolo izao
Tetikasa vaovao an'ny orinasa simika anatiny
1. Araka ny toe-piainana miasa sy ny fepetra miasa amin'ny paompy plunger hafa, ny SICER dia hamolavola tolo-kevitra teknika seramika manokana sy fisafidianana mody.
2. Na ny tombo-kase miovaova na hentitra dia azo alefa amin'ny fitakiana isan-karazany.
3. Ny fitaovana vita amin'ny seramika paticular sy ny fitaovana fanosorana tena dia azo omena ho an'ny matchaingan'ny mpivady fikolokoloana mba hampihenana ny abrasion.
4. Ny herinaratra, ny pneumatic ary ny fanaraha-maso lavitra dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanasarahana tsara ny valizy.
Fitaovana seramika samihafa ho an'ny fampiharana samihafa mifandraika.
1. Alumina (Al2O3) dia iray amin'ireo fitaovana seramika ara-toekarena indrindra, manana fananana fanoherana harafesina sy fanakorontanana lehibe izy.
2. Zirconium (ZrO2) no tanjaka sy hamafisana avo indrindra amin'ny hafanan'ny efitrano misy ny seramika vita maotera rehetra. Saingy io fetra ZrO2 io dia misy fetran'ny hafanana miasa, ny maripana Max dia 320 degC.
3. Silicon Nitride dia iray amin'ireo fitaovana seramika lehibe indrindra ampiasaina amin'ny fampiharana mari-pana avo lenta, trano manokana sy ampahany amin'ny seramika mamela ny hafanana vahaolana hatramin'ny 950 degC.
4. Silicon Carbide no fitaovana henjana indrindra amin'ny keramika vita engineera rehetra, amin'ny teny hafa ny hamafin'ny SiC eo akaikin'ny Diamond. Fa ny hamafin'ny SiC ambany dia ambany kosa dia fahalemena lehibe ho an'ny faritra seramika, mora tapakaina izany.
Teo aloha: SICER - Plunger amin'ny Ceramic
Manaraka: Cone mpanadio seramika
Valvezana Ceramic Ball
Valve voaravaka keramika
Valve vita amin'ny seramika feno
Valizy lolo Ceramic Pneumatika